Zvigadzirwa Vagadziri - China Zvigadzirwa Factory, Suppliers
8M GSM Monopole Steel Tower For Broadcast TV
Nhaurirano shongwe imhando yechiratidzo chekufambisa shongwe, inozivikanwawo sechiratidzo chekutumira shongwe kana chiratidzo chechiratidzo.Basa rayo guru ndere kutsigira chiratidzo chekufambisa uye chiratidzo chekufambisa antenna.Chinangwa: Nharembozha / China Unicom / yekufambisa satellite yekumisikidza system (GPS) uye mamwe madhipatimendi ekutaurirana.
Single pombi danda ndeimwe yeakajairika masitaera ekutaurirana shongwe.Inofarirwa zvakanyanya nekuda kwenzvimbo yayo diki yepasi uye huremu huremu.
10M Simbi Microwave Monopole Telecom Tower
Single tube tower, imhando inowanzoshandiswa, ine chimiro chakanaka, inovhara nzvimbo diki ye9 kusvika 18 square mita, inodhura-inoshanda, uye inogamuchirwa ne, ruzhinji rwekuvaka.Tower body inotora chikamu chinonzwisisika, icho chakabatana kuburikidza nepamusoro simba bolt.it ine hunhu hwekumisikidza nyore uye inogona kuchinjika kune dzakasiyana siyana dzakaomesesa faira saiti.
Kukurukurirana single Tube Steel Monopole Wifi Antenna Tower
Monopole Tubular Tower Pole imhando yeinobatsira uye novel iron shongwe.Inoshandiswa zvakanyanya nezvikamu zvekuvaka nekuda kwenzvimbo yayo yakanaka, nzvimbo diki yepasi, kudhura kwekuita uye kusimba.Inonyanya kushandiswa microwave, ultra short wave, wireless network signal transmission uye transmission.
Galvanized Steel WiFi Tower Pole Shongwe
Wi-Fi shongwe shongwe dzinoburitsa nzira yakananga yechiratidzo inosvika mamaira makumi matanhatu uye inongotaurirana chete nedzimwe shongwe dzeWi-Fi kana dzine maonero asina kuvharika pakati padzo.Tsvaga tsananguro yemakambani Supplying Wifi Tower, Manufacturing & wholesaling wifi towers kuChina..Tora Wifi Tower pamutengo wakanakisa kubva kuFactory yakananga, Bata Ikozvino !!!
Q235B Q355B Steel TV Antenna Broadcasting Tower
monopole tower, inowanzoshandiswa mhando yenhare yenhare, ine chitarisiko chakanaka, inofukidza nzvimbo diki ye9 kusvika 18 square mita, inodhura-inoshanda, uye inogamuchirwa ne, ruzhinji rwekuvaka.Tower body inotora chikamu chinonzwisisika, icho chakabatana kuburikidza nepamusoro simba bolt.it ine hunhu hwekumisikidza nyore uye inogona kuchinjika kune dzakasiyana siyana dzakaomesesa faira saiti.
Single tube tower zvakare Inonzi monopole tower, imhando inowanzoshandiswa, ine chitarisiko chakanaka, inofukidza nzvimbo diki ye9 kusvika 18 square mita, inodhura-inoshanda, uye inogamuchirwa ne, ruzhinji rwekuvaka.Tower body inotora chikamu chinonzwisisika, icho chakabatana kuburikidza nepamusoro simba bolt.it ine hunhu hwekumisikidza nyore uye inogona kuchinjika kune dzakasiyana siyana dzakaomesesa faira saiti.
12m Sravana Sameeralu Serial 12t Mobile Light Monopole Tower
Mheni shongwe inonyanya kushandiswa mukudzivirira mheni purojekiti yezvivakwa zvakasiyana, Mhando huru: angle simbi mheni tsvimbo shongwe, yakatenderera simbi mheni tsvimbo shongwe, simbi pombi pole mheni tsvimbo shongwe uye zvichingodaro.
imwe-stop sevhisi yedhizaini, kugadzira uye kutengesa kweshongwe yekutepfenyura, Fekitari yakananga, China Supplier & Mugadziri, Ziva Zvakawanda Imformation, Inquiry It!
China mugadziri & mutengesi kunze kwe3-120m telecommunication shongwe uye chimiro chesimbi, ISO certified bhizinesi, China fekitori yakananga, kubvunza izvozvi!
123456Next >>> Peji 1/9